IIPLANI ZEPHULI ZOKUDADA EZIMANGALISAYO EZINGAMA-33 - AMACHIBI OKUDADA
Eyona amachibi Okudada Iiplani zePhuli zokuDada eziMangalisayo ezingama-33
Wamkelekile kwigalari yethu yoyilo lwangoku lweephuli ezinendawo esemhlabeni, ngaphezulu komhlaba, amachibi angenasiphelo kunye neempawu zamanzi.
Yintoni enokuphumla ngakumbi kunokubuyela umva kwakho kanye emva kwendlu yakho? Amachibi okudada awenzi nje kuphela ubuhle bekhaya lakho, kodwa azisa umoya opholileyo ngelixa unika indawo efanelekileyo yokuphumla kunye nokuphumla. Nokuba kungokuzonwabisa okanye ukuchitha ixesha elinomgangatho nosapho kunye nabahlobo, ichibi lokuqubha lilungiselela zombini iimfuno zomsebenzi kunye nomtsalane obonakalayo ekhaya.
Uyilo olumangalisayo lwala maxesha olubonakaliswe apha ngasentla lubonisa iphuli entle ebukekayo eqaqanjiswe ngemigangatho emihle yomgangatho wethayile kunye neentsika zekhonkrithi ezimhlophe. Amanyathelo echibi akhokelela kwindawo yokuhlala enikezwe izitulo zengalo yanamhlanje enezihlalo ezimhlophe ezibotshiweyo kunye necala elilinganayo neetafile zeziko. Ukubekwa kwayo ngobuchule kuvumela abasebenzisi ukuba bonwabele umbono ohlaziyayo wamanzi apholileyo aluhlaza. Umgangatho okhanyayo weplanga yomgangatho wokhuni unika indawo indawo ethe kratya, ngelixa amatye amhlophe omlambo ongezela indalo kwisimo.
Ngeminyaka exhasa imvelaphi yabo, uyilo lwamachibi okudada atshintshile njengoko beziqhelanisa nesimbo esixhaphakileyo kunye neendlela zokwakha. Ukusuka kwimo yemilo yezintso yemveli, uyilo lwazo luye lwaba lula, lwaba nenhle kwaye lwacwangciswa. Amachibi okudada anamhlanje aziwa ngokuyila kakuhle kunye nemigca ecocekileyo. Ngokuqhelekileyo ibonakaliswa ngokubonakalisa isitayela sokwakha ikhaya, ukusebenza njengomphelelisi kunokuchasana noyilo.
Igama lale mihla alithethi ukuba kukho into ekufuneka yakhiwe kusetyenziswa ubugcisa, izinto zobuchwephesha obuphezulu kunye nezixhobo eziphezulu. Owona mceli mngeni uyintloko kukuyila iphuli yanamhlanje kukuyixuba ngaphandle komthungo ngaphakathi nangaphandle ngelixa ugcina i-aesthetics icocekile kwaye incinci. Ukulula kuyinto ephambili kwaye kuncinci kuninzi.
Uyilo lwale Dama ngoku
Kule mihla Ingaphezulu kwamachibi asezantsi
Iphuli yanamhlanje kunye ne-Spa
Iithayile zala Phuli yanamhlanje
Iithayile zeCeramic kunye nePorcelain
Iingcamango zanamhlanje zamachibi
Uyilo olungenasiphako lweli chibi lwanamhlanje elingenasiphelo lenza utshintsho olugudileyo olubonakala ngathi luhamba ngokukhululekileyo kwindalo esingqongileyo. Ubume befom yasimahla bubukeka buhleli kwaye buqhelekile kwindalo yokujonga ulwandle. Amanyathelo ekhonkrithi aphakanyisiweyo akhokelela kwisiqithi setyhula esibekwe embindini wedama elinendawo yokuhlala, enika abasebenzisi indawo yokonwabela ixesha lokuphumla ngelixa bephefumla umoya ujonga amanzi aluhlaza kunye indalo echumayo. Olu lwakhiwo lwamachibi olwanamhlanje luyindawo yokuhlala yasezidolophini.
• Ngaphakathi emhlabeni, Phezulu komhlaba okanye kwiPhuli engapheliyo Uhlobo lwechibi lolona sigqibo sikhulu ekufuneka usenzile xa ucwangcisa iphuli yakho yanamhlanje. Iphuli yanamhlanje ingaba lolunye lweendidi ezintathu zamachibi, ezizezi: ichibi elingaphantsi komhlaba, ichibi elingasentla elingasentla kunye nelokungenasiphelo.
Umyeni wesipho seminyaka eli-10
Emachibini omhlaba afakwa ngokusisigxina amachibi ahlala enziwe ngevinyl, i-fiberglass okanye ikhonkrithi. IVinyl kumachibi angaphantsi komhlaba enziwe ngemiqadi yentsimbi eqinisiweyo egutyungelwe nge-vinyl lining. Amachibi ekhonkrithi, njengoko igama libonisa ukuba enziwe ngesamente kunye nekhonkrithi. Banikezela okona kuzinza kulungileyo kwaye bhetyebhetye xa kusenziwa kuyilo. Amachibi e-fiberglass akhiwe ngeqokobhe le-fiberglass ebunjiweyo efektri emva koko efakwe eyadini okanye kwipropathi. Kumachibi omhlaba aziwa ngobungakanani bawo obunokwenzeka ngokwezifiso kunye nokuma kwawo.
Ngaphezulu kwamachibi omhlaba okwethutyana kwaye zihlala zinobungakanani obulinganiselweyo, kodwa zitshiphu ukuzifaka. Ngokungafaniyo namachibi angaphantsi komhlaba anokuthi andenze ngeendlela ezahlukeneyo zasimahla, ngaphezulu kwamachibi omhlaba ahlala eza ngeesetyhula kunye noxande iifom. Funda ukuze wazi ngakumbi ngamachibi anamhlanje angentla komhlaba.
Amachibi e-infinity, kwelinye icala, ngamachibi anika umbono wokudibana kwamanzi kunye nolwandle olungqongileyo okanye umhlaba. Banikezela ngombono owahlukileyo wobuhle bendalo. Olu hlobo lwedama lokuqubha zihlala zinomphetho wokunyamalala odala umphumo wokujikeleza okuqhubekayo. Amachibi e-infinity axhaphake kuseto lwanamhlanje ngenxa yokujongeka kwawo.
Nokuba ukhetha ntoni phakathi kwezi ntlobo zilandelayo, qiniseka ukuba idibana ngokuhambelana nesitayile esele sikhona sendlu yakho.
• Imilo yejiyometri Uyilo lwala maxesha lubonakaliswa ziimilo ezilungelelanisiweyo, imigca ecocekileyo kunye neefom zeengile. Nangona kungekho nciphiso malunga nendlela oyikhetha ngayo imilo yedama lakho lokuqubha, iifom zoxande zisetyenziswa ngokubalaseleyo kuyilo lwamachibi ale mihla. Kungenxa yokuba, iifom ze-angular zihlala zibonisa izinto zokwakha zekhaya langoku, nangona kunjalo ukuba ufuna ukubonisa amandla, imilo egobileyo ehamba nayo inokusetyenziswa. Amachibi angunxantathu nawo athathelwa ingqalelo njengodidi, ukunika ucoceko kwaye ucocekile. Ngezinto ezifanelekileyo zokujikeleza iiphuli, ichibi elenziwe ngejometri alisoze laphuma ngesitayile.
• Amanqaku ePhuli amancinci -Isitayile esincinci esincinci sinokufezekiswa ngokusebenzisa uyilo olunqabileyo lwedama lakho. Nciphisa umhombiso wakho kunye neempawu, kodwa endaweni yoko bambelela kumphezulu ogudileyo kunye neempawu zoyilo ezifihlakeleyo. Gcina izilayidi ezinkulu zamanzi, igrockos yamatye kunye nemifanekiso eqingqiweyo ukuze ujongeke ngakumbi. Amachibi anamhlanje kunqabile ukuba abonise izihombiso kodwa endaweni yoko abonisa inani leefenitshala ezintle kumgangatho kunye nokukhanya okufudumeleyo.
Eli chibi lokudada elinomtsalane libekwe phezu kwendlu yendlu enendawo yesibindi kunye nembono ogqibeleleyo wesibhakabhaka. Imabhile emhlophe enombala omhlophe ongwevu isetyenziselwa ukutyibilika ukongeza isiphumo esomeleleyo ngelixa iithayile zamatye endalo ezimnyama zisetyenziselwa indawo yokuhlala ukwenza umahluko kuyilo. Ukongezwa kwesinyithi kunye ne-canopy yelaphu ayinikezi umthunzi kuphela kodwa ikwabonelela ngento ebonakalayo ebonakalayo edibanisa ukujonga ngokubanzi kwendawo. Iibhedi zemihla ngemihla eziphakanyisiweyo zisebenza njengezihlalo ngelixa ukusetyenziswa kweziporo eziphezulu zeglasi zibonisa ukuqhubeka kunye nokuvuleka okwenza ukuba uphahla lubonakale lukhulu.
• Iimpawu zaManzi ezinomtsalane - Iimpawu zamanzi zinokongezwa kwidama lakho ukuphucula zombini ubuhle kunye namava okubhukuda. Ngaphandle kwalonto, bayarhwebesha kungekuphela nje umbono wokubona, kodwa nengqondo yokuthinta ngokunjalo. Iimpawu zamanzi zikwabonelela ngezibonelelo zonyango. Benza isandi samanzi ahambayo esinika isiphumo sokuthomalalisa. Benza amaqhuqhuva, amaza amancinci kunye nokuhamba okuthomalalisa amehlo. Zisebenza njengemassage yehydro kwaye zinika isiqabu okwethutyana kwizhlunu ezibuhlungu.
Xa ukhetha indawo efanelekileyo yamanzi echibini lakho lanamhlanje, khetha uyilo olulula kunye nokunciphisa inani lalo. Umthombo womjelo omnye okanye ukuhamba kwamanzi amancinci kudala inqaku lomdla ngaphandle kokuphanzisa indawo. Kulumkele ukusebenzisa iingxangxasi ezinkulu zamatye okanye imithombo yentloko yengonyama. Olunye uhlobo lweempawu zamanzi echibini langoku ziijets, i-spillover spas, iingxangxasi kunye neescupper.
• Ngaphantsi, Ukufudumeza Ukukhanya KwePhuli - Xa ukhetha ukukhanya okufanelekileyo kwiphuli yakho yanamhlanje, jonga ukhetho lokukhanyisa oluqhelekileyo olunembonakalo engaphantsi. Ukulungiswa kwemigca echazwe kakuhle kunye nezitayile zangoku zilungile kolu seto. Izibane ezilula zetotshi kunye nemingxunya yomlilo elinganayo inokuqwalaselwa. Ukukhanya okungaphantsi kwamanzi, khetha izibane ezihlala shushu ezimhlophe ngombala ukwenza umoya ococekileyo kunye nothanda.
• Ifenitshala elula yala maxesha Iziqwenga zefanitshala zihlala zongezwa kumgangatho wedama kunye neepatio ukubonelela ngeendawo zokuhlala kunye nokwenza indawo yokuphumla kunye nokuphumla. Xa ukhetha iifenitshala ezifanelekileyo zeephuli zakho zanamhlanje, jonga zombini i-aesthetics kunye nokusebenza. Kukwabalulekile ukubeka ipremiyamu kwinduduzo njengoko indawo echibini kufuneka ikhuthaze uxolo kunye nokulula. Hlala kunye neziqwenga zefenitshala zanamhlanje ezintle kwaye zincinci. Khetha izitulo zangoku ezenziwe nge-wicker, rattan kunye namalaphu amelana namanzi. Faka izitulo zokuphumla ukuvumela abasebenzisi ukuba bathathe ikhefu xa bebhukuda, basebenzise iisofa kunye nezitulo ezinamakhamandela amakhulu kwaye kamnandi, basebenzise iitafile zeziko lomthi ukutshatisa umgangatho womgangatho okanye ukunamathela kwiitafile zeglasi ukongeza umahluko ocekeceke ekubunjweni. Imilenze ye-Accent ingasetyenziselwa ukongeza umbala. Iiambrela ezisongelayo kunye neekhanibhu eziphathwayo zinokubandakanywa ukubonelela ngomthunzi kunye nokukhuselwa elangeni.
• Imiphezulu yeSleek Ukuhambelana nobuhle bemihla ngemihla kunye nesibheno esincinci, khetha iindawo ezigudileyo nokuba zezokuphela kwephuli okanye izinto ezingqonge isithuba. Yiya kugqitywa ungagunyaziswanga kwaye uphephe ukusebenzisa abo bangaphaya kwamandla abo njengoko inomdla wokungqubana noyilo esele lukhona ekhaya, kunokuba udibane nalo ngokuvumelanayo.
• Ukuhombisa kule mihla -Izixhobo zokuhombisa zikwanxulumene noyilo lwephuli yakho yanamhlanje. Badibanisa izithuba kwaye basebenze njengezongezo ezibonakalayo zezithuba. Qinisekisa ukuba izinto zakho zokuhombisa zilungelelaniswe kakuhle nezinto zokwakha zendlu kunye neendawo ezijikelezileyo ngokunjalo. Oku kuqinisekisa ukuba ichibi lakho langoku lidityaniswa ngokudibeneyo kunye nesimbo sokuyila esikhoyo.
Ukuhonjiswa ngomthi yenye yezona zinto zixhaphakileyo ezisetyenzisiweyo kuseto lwangoku lweephuli. Inika ukonwaba kwendalo kunye nobuhle kwisithuba. Ukongeza kuloo nto, iza nezibonelelo ezibonakalayo kuba zomelele, ziyanyibilika kwaye zinokuhlala unyaka. Olunye ukhetho lilitye lendalo. Umgangatho wamatye okwendalo wongeza ubushushu kwaye wenza iindawo zamkeleke ngakumbi. Izibonelelo zalo zibandakanya ukuhlala ixesha elide kunye nokomelela nokuba kuvele ukufuma.
Xa ukhetha izinto ezifanelekileyo zokuhombisa iphuli yakho, qiniseka ukunamathela kwimibala engathathi hlangothi efana nemhlophe, ngwevu kunye nemibala yomhlaba. Ukuba ufuna ukongeza idrama kuyilo, khetha okanye ukugqitywa kwelitye lendalo elinemigca embala kunye nokwahluka kwemibala.
• Ukulungisa umhlaba ngobuchule - Ukwenza uyilo oludibeneyo, ichibi lokuqubha kufuneka lifakwe kakuhle kunye neendawo ezijikelezileyo kwisithuba. Izityalo kunye nemithi zibalulekile kuseto lwedama kuba zithambisa izinto zokwakha kwaye zibonelela ngokuhlaziyeka.
Khangela izityalo ekulula ukuzigcina kwaye zikhuselekile ukuzisebenzisa. Ngokwe-aesthetics, khetha izityalo ezinemifanekiso eqingqiweyo enjengeesucculents okanye amagqabi. Yongeza izityalo eziqhakaza iintyatyambo ukuba ufuna ukubamba umbala kwaye wongeze imithi ecaleni komda wedama ukuze ufumane umthunzi okanye wenze ubumfihlo. Imithi yesundu igqibelele xa ufuna ukwenza imvakalelo yetropiki. Ingca yokuhombisa inokuphinda isetyenziswe kuba ezi zinto ziphantsi kolondolozo kwaye zibonakala zibonakala.
ukuthanda iqela le-bachelorette
Le patio intle igqunyiweyo ikhokelela echibini lakwanamhlanje elibekwe kumda wendlu ukuze basebenzise indalo kunye neembono. Ifom yoxande yeephuli ibonisa iimilo ezi-angular zezinto zokwakha zale ndlu-ukusuka eluphahleni olulula loxande ukuya kwiziqwenga zefanitshala ezilungelelanisiweyo. Amatye amnyama angaphantsi komhlaba abolekisa amandla kwisithuba ngelixa esenza umahluko ocacileyo kumbala ombala mhlophe. Indawo yokuhlala yeli patio kunye nendawo yokubhukuda yenzelwe njengegumbi lokuhlala ngaphakathi, kunye neesofa zangoku, iipilo ezimhlophe ezithambileyo kunye netafile yekofu eyenziwe ngomthi. Ukongezwa kwezityalo kubopha uyilo ngokudibeneyo kwindalo esingqongileyo.
Idama elingaphezulu komhlaba lelona khetho lilungileyo labanini bamakhaya abafuna ukuchitha imali encinci, umgudu kunye nexesha ekwakheni iphuli yokudada. Ihlala iza nekhithi enamacandelo apheleleyo kwaye yenziwa ukuba ilingane eyadini yakho. Xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zamachibi, ngaphezu kwamachibi omhlaba kulula ukufaka kunye nokukhawuleza ukwakha. Inkqubo yokumisela kunye nokufaka ithatha inani leentsuku ezimbalwa xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zephuli kwaye ihlala iqhutywa liqela lobungcali labafakeli.
Olu hlobo lwedama lokuqubha luthathwa njengesakhiwo sethutyana. Inokususwa ngokulula kwikhaya lakho ukuba sikhona isidingo. Ngaphezulu kwamachibi omhlaba ahlala esiza ngokujikeleza, okweqanda okanye imilo yoxande kunye nobukhulu bayo buyahluka. Ngokwesiqhelo, ubunzulu bayo buba zii-intshi ezingama-48 ukuya kwezingama-intshi ezingama-52 ubunzulu okanye iinyawo ezi-4 ukuya kwii-4 iinyawo ezinzulu. Inokudityaniswa kwi-decking esele ikho, isethwe kufutshane nendawo yokuhlala yangaphandle okanye ifakwe kwindawo ejikeleze ikhaya kunye nokusingqongileyo.
Isiphelo esiphakamileyo ngaphezulu kwamachibi omhlaba lolunye uhlobo olulungileyo lwamachibi asemhlabeni kuba ezinye zoyilo ziza nezinto ezongeziweyo ezibonakalayo nezisebenzayo. Izitimela, ukuhonjiswa, okwakhiwe ngocingo kunye nesango zezinye zezongezo ezikhoyo kumachibi angaphezulu komhlaba. Inokufudunyezwa ukuze abasebenzisi bahlale kuyo ixesha elide kwaye bekhululeke ngakumbi. (Bona Okuninzi Izimvo zocingo lokuqubha Apha)
Imilo esemgangathweni efumaneka kuyo ngamanye amaxesha inokuba kukulingisa kuyilo, kodwa ngocwangciso olufanelekileyo kunye nofakelo, inokudityaniswa kakuhle kubume bekhaya lakho. Kananjalo abanye abaninimzi bakufumanisa oku kuyinzuzo njengoko beqala ngento encinci ukuba banohlahlo-lwabiwo mali oluqinileyo, emva koko batshintshe babe lichibi elikhulu xa uhlahlo-lwabiwo mali lonyuka kwaye nosapho lwabo lukhula.
Enye yeengxaki zokuchaphazeleka kwephuli yomhlaba engentla kukuba ngaphandle kokuba yeyethutyana, usafuna ukutyala ixesha kunye nemali ekubekeni enye ukuze udibane nembonakalo yelizwe lakho. Kwakhona, ichibi elingasentla elingentla ngokubanzi alongezi xabiso ekhayeni lakho. Kwimeko apho kuthengiswa kwakhona eli khaya, abanye babanini bamakhaya banokufumana ngaphezulu kwamachibi omhlaba ukuba azobe kude kubuhle beyadi. Nangona kunjalo, le ngxaki inokuqwalaselwa ukuba ichibi lakho elingasentla lomhlaba ukuba licwangciswe kakuhle kwaye lenzelwe kakuhle ukuba lilungele ubume bekhaya lakho. Imiba yesondlo nayo yenye yeempawu ezimbi zamachibi angaphezulu komhlaba.
Ukubenza basebenzele useto lwala maxesha, hamba kunye noxande ngaphezulu kwephuli yomhlaba kuba ubume bayo obungqongqo buhambelana noyilo olulungelelanisiweyo lwamakhaya anamhlanje. Ixande elingaphezulu kwamachibi omhlaba ahlala ejikelezwe sisongelo kumgangatho wedolophu ukubanika inkxaso eyongeziweyo yolwakhiwo.
Kwakhona, kunokwenzeka ukuyila iphuli yomhlaba engaphezulu ngohlobo lokuba ijongeke njengephuli yomhlaba. Inokwenziwa ibe yinto esisigxina kwindlu. Sebenzisa indawo efanelekileyo yokugqibezela ukubonelela ngechibi elingaphezulu komhlaba kunokwenza umahluko omkhulu. Ngokongeza ilitye lendalo, ikhonkrithi okanye ukhuni ngaphandle kwiphuli yakho engaphezulu, inokubonakala inomdla ngakumbi. Amanyathelo amatye kunye nokuhonjiswa kweenkuni kunika indalo kwisimo sechibi. Izinto ezongeziweyo ezibonakalayo ezinje ngeziqwenga zefanitshala zangaphandle ezintle zinokuyiguqula kwangoko iphuli yakho yomhlaba ibe yinto yanamhlanje neyangoku.
Iindleko: Kulabo kuhlahlo-lwabiwo mali oluqinileyo, iphuli yanamhlanje engentla yeyona ndlela inexabiso eliphantsi onokuyithatha ukwakha elakho iphuli ngasemva kweyadi yakho. Ukwakha ichibi elingaphezulu komhlaba kuhlala kubandakanya izinto ezimbini zexabiso, ixabiso lekhithi kunye neendleko zokufaka. Inokukubuyisela umva phakathi kwe- $ 1500 ukuya kwi-4500 yeedola, kuxhomekeke kwizinto kunye nomgangatho wedama. Amachibi anomxholo we-resin kunye nezinto ezincinci zetsimbi zibiza kakhulu kodwa zihlala ixesha elide. Amachibi e-Oval ayabiza kakhulu kunalawo ajikelezayo, zombini ikiti kunye nokufakwa ngobulumko. Amachibi angunxantathu asonge ii-deck zezona zibiza kakhulu kwaye anokufikelela kwi- $ 10,000 yakuba ifakiwe. Ukufakwa kungabiza naphi na ukusuka kwi- $ 1000 ukuya kwi- $ 3000, kuxhomekeka kuhlobo kunye nobungakanani bephuli.
Ixesha lokuphila: Okwexeshana ngaphezulu kwamachibi omhlaba ahlala eza nefom yewaranti ababoneleli babo. Ngokomndilili, inokuhlala naphi na ukusuka kwiminyaka esi-7 ukuya kweli-15. Kwelinye icala, ii-liners zedama elingaphezulu komhlaba kufuneka zitshintshwe yonke iminyaka emi-5 ukuya kweli-9.
Indawo enkulu yale yadi ivumela ukuseta indawo yokuhlala ngaphandle. Ukubonisa ubuhle, ubunewunewu kunye nobunkunkqele, le yanamhlanje kumachibi omhlaba kunye ne-spa isebenzisa ukutyibilika kwethayile kunye nezibane ezifudumeleyo eziphantsi kwamanzi ezenza ukuba indawo ibe mnandi ngakumbi kwaye imeme. Ibhafu encinci ye-spa ibekwe kwikona, ibonelela ngendawo yokuphumla. Isici samanzi esiphakamileyo esigxininiswe kwilitye lendalo kunye nokukhanya okukuko kunika umdla owongeziweyo ngelixa unikezela ngento eguqukayo kwisithuba. Iibhentshi zamatye zibandakanyiwe kwindawo eyakhiwe ngomlilo enikezela abanini khaya kunye neendwendwe indawo yokubamba ukufudumala.
Kulabo banokunethezeka kohlahlo-lwabiwo mali kunye nendawo, i-spa ihlala yongezwa kumadama okudada ukwandisa amava kunye nokubonelela ngendawo yokuphumla. Injongo yayo ephambili kukuhlala kunye nonyango lwamanzi, ngokungafaniyo nedama eliqhelekileyo elinendawo eyaneleyo yokubhukuda.
Yintoni eyenza i-spa yahluke echibini? Ixesha le-spa lihlala litshintshaniswa negama elishushu njengoko zombini zinenjongo kunye neempawu ezifanayo. Ngokobungakanani, i-spa incinci kuneyokudada. Isebenza ngokubanzi njengesihlomelo esiqhotyoshelwe ngqo kwiphuli yomhlaba okanye kwezinye iimeko ezikufutshane nedama eliphambili. Ngokwenkcazo, i-spa ibhafu enkulu, iphuli encinci okanye iqhekeza elinye leplabhu eligcwele amanzi ashushu asetyenziselwa iinjongo zokuphumla. Isetyenziselwa ukonwabisa, ukufudumeza, ukufunxa kunye ne-hydrotherapy. Ii-Spas zihlala zixhotyiswe ngokwakhiwa kwejets zamanzi ezisetyenziselwa iinjongo zokuthambisa, njengoko zijolise kwimisipha yomsebenzisi. Ikwayilelwe ngendlela yokuba umsebenzisi akwazi ukuthatha ikhefu emanzini apholileyo echibi lokuqubha eliphambili kwaye aphumle emanzini afudumeleyo e-spa.
Ubungakanani obuqhelekileyo be-spa zii-8 iinyawo ububanzi nge-15 iinyawo ubude kwaye zihlala zihlala abantu abadala abalishumi elinanye. Ii-spas ezincinci zihlala zi-3 ukuya kwi-4 inyawo ukuphakama kunye ne-5 yeenyawo ububanzi okanye ububanzi. Ezi modeli zinokubamba ukuya kwi-500 yeelitha zamanzi. Ezinkulu, kwelinye icala, zenzelwe ukubamba iilitha zamanzi ezili-1100 kwaye zihlala zi-4 ukuya kwezi-5 iinyawo ukuphakama nge-6 inyawo ukuya kwi-8 yeenyawo ububanzi okanye ububanzi. Ngokomndilili, i-spa encinci inokulungiselela abasebenzisi ababini ukuya kwabathathu ngaxeshanye, ngelixa ii-spas ezinkulu zinokuhlala ukuya kubasebenzisi abalishumi elinanye ngaxeshanye.
Ii-Spas zihlala zineentlobo ezimbini, i-spa ephathekayo kunye neyakhelwe ngaphakathi okanye kumhlaba ongaphantsi. Ii-spas eziphathekayo zihlala zenziwe nge-latex, i-vinyl, i-acrylic, i-fiberglass, i-polyethylene okanye ezinye iiplastiki. I-Spas eyakhelwe ngaphakathi okanye eyenzelwe ngokwesiqhelo ihlala isebenzisa iinkuni, ikhonkrithi, i-fiberglass, umpu, iithayile, isinyithi kunye nezinye izinto zendalo. Ukuma wedwa iimodeli kunokubekwa emhlabeni ukubenza bajongeke njenge-spa enground. Ezi zinokubekwa kwiqonga eliphakanyisiweyo okanye zonyuswe nge- pergola okanye gazebo . Olunye uyilo, ii-spas zibekwe ngaphakathi echibini ngokwalo.
Indlela ethe kratya yanamhlanje yedama kunye ne-spa combo kukudibanisa zombini kubume obunye, okukhokelela kwidama lokudada elingaphantsi kakhulu, kodwa kabini ubude be-spa ephakathi. Le hybrid yaziwa njenge spool kwaye isebenza kakuhle kubanini bamakhaya abaneendawo ezinomda kodwa bafuna ukonwabela zombini izinto ezidityanisiweyo zephuli kunye ne-spa.
Ii-Spas zibonisa inkqubo yamanzi eshushu. Oku kuhlala kusetyenziswa isifudumezi sombane, isifudumezi segesi sendalo, okanye kwezinye iimeko, iinkqubo zokufudumeza ilanga. Amanzi ayo ahlala eshushu ukuya kuthi ga kwiidigri ezingama-90 ukubonelela ngokuzola okuphungula iintlungu zemisipha kunye noxinzelelo. Ikwasebenzisa iijets zamanzi ezinamandla ezifanelekileyo zokuthambisa amanzi. Ii-Spas ezenzelwe i-hydrotherapy zihlala zibandakanya iijetshi zamanzi ezintandathu ukuya kwezilishumi elinambini, ezinikezela ekujoliseni izihlunu ezithile zomzimba. Ikwahlala inikwa amandla kusetyenziswa i-jet propulsion, i-propelerl okanye ivili lokujikeleza elijikeleza ukuhamba kwamanzi kunye nokukhoyo ngoku. Okwangoku kunokuhlengahlengiswa kwinqanaba elithile lokumelana nokwenza amava e-spa abe mnandi kwaye aphumle.
Kumachibi anamhlanje kunye nee-spas, ezi ziyilelwe ngendlela yokuba zinotshintsho olugudileyo phakathi kwazo. Nangona kungekho sithintelo malunga nendlela ekufanele ukuba ibonakale ngayo, ukudityaniswa okungagungqiyo kwezi zakhiwo zibini kunokunika indawo yangasemva kwendlu yakho ukuziva ubukeka kwaye ubukeka. Zama kwakhona ukugcina kugqityiwe kwaye kungathathi hlangothi ukuze uhambelane nesikimu sombala esele sikhona yoyilo lwasekhaya.
Ulondolozo ngobulumko, i-spa ifuna ukugcinwa rhoqo kunye nonyango lweekhemikhali. Ucoceko olululo lukwabaluleke kakhulu njengoko izinto eziphilayo zinokukhula kwimeko yokufuma. Qiniseka ukuba ubandakanya inkqubo efanelekileyo yokuhlanjululwa, nokuba ingaba yinkqubo yohlobo lokucoca ulwelo okanye inkqubo yokuhlanjululwa kwe-ultraviolet.
Iindleko: Iindawo zokuqubha zinokubiza kangangesiqingatha sedama lokuqubha eliqhelekileyo. Ngokomndilili, iindleko zayo zinokuqhuba naphi na ukusuka kwi- $ 8,900 ukuya kwi-23,000 yeedola ngeprojekthi nganye. Ii-spas ezincinci eziyi-10-16 yeenyawo ngobukhulu zihlala zibiza i-8900 ukuya kwi-12,000 yeedola. Iindleko zayo zokusebenza zitshiphu, njengoko inokuthatha kuphela i-avareji ye- $ 2 ukuya kwi- $ 3 ngosuku okanye i- $ 80 ukuya kwi- $ 100 ngenyanga.
Eli dama lokuqubha elimangalisayo libonakala ngathi liyadada elwandle. Ukuqhubeka kunye notshintsho olugudileyo kuyabonakala kuyilo lweli chibi langaphandle njengoko umxube owahlukileyo wee-hues ezipholileyo eziluhlaza kwiithayile ze-mosaic zinika isiphumo esibonakalayo samanzi ahlaziyayo aphantse afane nombala wolwandle olujikelezileyo. Eli chibi lokudada lingaphezulu komhlaba libekwe phezu kweqonga eliphakanyisiweyo kusetyenziswa ikhonkrithi.
Iithayile zephuli zingenza okanye zaphule inkangeleko yedama lakho lokuqubha. Ngenxa yokuba inendawo yonke yedama lakho, iithayile zezona zinto zibonakalayo ezibonakalayo. Ilungelo nalo liyafuna
Iithayile zephuli ziyimfuneko kungekuphela ngenxa yezizathu zobuhle kodwa kwanokusetyenziswa kokubonakalayo. Ithayile, ngokubanzi, kulula ukuyicoca kwaye ifuna ukugcinwa okuncinci- xa kuthelekiswa nokugqitywa kwekhonkrithi okusekwe njengelitye lenyengane kunye nelitye lendalo. Iithayile zikwanikezela umphezulu ogudileyo kakhulu ovumela abasebenzisi ukuba bachithe kamnandi iiyure bemi emanzini ngaphandle kokuziva bediniwe. Kuyanceda nasekugcineni izidada zizinze ngexesha lokuhlala emanzini.
Iithayile ezisetyenziselwa amadama okuqubha ziwela phantsi kodidi oluthile lodidi. Kuba iithayile zedama lokuqubha zihlala ziveliswa kunyango lweekhemikhali kunye namanzi anyangiweyo ngeklorine, iithayile eziqhelekileyo zeceramic aziyi kukwazi ukungena kuyo. Iithayile zamachibi okudada nazo ziphantsi kobushushu obugqithisileyo kunye nobushushu belanga, ke oko kufuna izinto eziyilelwe ngokukodwa loo njongo.
Kukho iintlobo ezininzi zeethayile ezinokusetyenziselwa ukuyila iiphuli zokudada zala maxesha. Ukhetho lubaluleke kakhulu kuba iithayile zinokuchaphazela kakhulu ixabiso lobuhle lephuli yakho yanamhlanje ngokuguqula kwangoko elona dama liqhelekileyo elijongwa kwinto ebonakalayo ekhayeni lakho. Ukukunceda uthathe isigqibo sokuba zeziphi ezizezona zilungileyo echibini lakho langoku, siqokelele uluhlu lwezinye zeendlela eziqhelekileyo zeethayile, kunye nesishwankathelo seempawu zazo kunye neempawu zazo ezilungileyo nezingalunganga.
Ikwabizwa ngokuba ziithayile zikaMoses, olu hlobo lweethayile zechibi ngamaqhekeza amancinci enziwe ngezinto ezenziwe ngegilasi. Ngokuqhelekileyo zincinci kuneetiles zeceramic eziqhelekileyo okanye iileyile zamatye zendalo kwaye zihlala zinomlinganiso weesentimitha ezimbini okanye ngaphantsi. Ubungakanani bayo obuqhelekileyo bunokuhamba naphi na ukusuka kwi-15 x 15 mm, 20 x 20 mm, 3/4 x 3/4 intshi, 1 x 1 intshi ukuya 2 x 2 intshi. Ifom yayo ayikhawulelwanga kuphela kubume besikwere kodwa inokuba ikwimo yoxande. Kuza ngeendlela ezahlukeneyo, ukungafihli nto kunye nokugqiba, kwaye kuyafumaneka kwimibala engapheliyo. Iithayile zeglasi nazo ziza ngokucacileyo okucacileyo kweglasi, i-opaque, iglasi erhabaxa kunye neglasi enenkxaso emhlophe.
Iithayile zeglasi zithathwa njengeyona nto ikhoyo ngoku kumachibi okudada anamhlanje. Ayithandwa kuphela ngenxa yokucoceka kwabo, ukubukeka kwabo okukhazimulayo kodwa kunye neenzuzo zabo ezibonakalayo. Ngokuyintloko, iithayile zeglasi ziyaziwa ngokufaka igalelo ekugqibeleni kumachibi anamhlanje. Uninzi lwabanini makhaya luyatsaleleka kuyo kuba luhle kwaye lunokusetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo. Iithayile zeglasi zihlala zisetyenziswa njengezinto eziphambili zokugqibezela okanye ukuvelisa ii-mosaic. Ingasetyenziselwa iindonga nje, ezantsi echibini, imida, inyathelo, iindonga eziphakanyisiweyo, iibhentshi, kumanqwanqwa angekho nzulu okanye ukuba uhlahlo-lwabiwo mali luyavuma, eli chibi liphela njengendawo yokuqala yangaphakathi. Ingasetyenziselwa ukwenza iindawo ezijolise kuyo kunye neempawu zamanzi. Ngokubanzi, amathuba okuyilwa okunikezelwayo akanakuphela njengoko inokusetyenziswa ngombala ofanayo okanye ixutywe kwindibaniselwano engapheliyo-ukusuka kwibala elifihlakeleyo ukuya kweyona mibala mihle. Uyilo olumangalisayo kunye ne-aesthetics ebonakalayo ebonakalayo ephumeleleyo ayinakuthelekiswa nolunye ugqibo lwedama lokuqubha.
Kwakhona, iithayile zeglasi zinesiphelo esimenyezelayo esiguqukayo ngokuxhomekeke kumgama ojongiweyo. Imibala nganye yeethayile yahlukile kufutshane, kodwa yakuba ifakwe emanzini, iyatshintsha idale ukudityaniswa okumangalisayo kwemibala. Impembelelo enayo iyafana naleyo ye-mosaic, apho isiqwenga ngasinye sinombala owahlukileyo, kodwa xa sidityanisiwe senza umfanekiso odityaniswe kakuhle. Olunye uphawu olwahlukileyo olunalo kukuba lubonakalisa kwaye luphinda ukukhanya kwakhona. Xa zidityaniswe namanzi, isiphumo sombala onamandla kunye nokutshintsha kwentshukumo ebonakalayo engalinganiyo kuyo nayiphi na enye into. Ngokubanzi, iithayile zeglasi zinika amachibi okudada inkangeleko eguqukayo ethi ivelise inkangeleko ehlaziyiweyo ngokuqhubekayo.
Iithayile zeglasi zithathwa njengenye yezona ndawo zineephuli zokudada ezihlala ixesha elide. Ezi zinto zilungele imeko yemozulu efudumeleyo kunye nengqele kwaye zinokumelana nokubola kwemichiza. Ngofakelo olufanelekileyo, iithayile zeglasi zihlala ixesha elide kune-porcelain okanye i-ceramic pool tile ehlala ine-15 ukuya kuma-25 iminyaka yobomi.
Ixabiso: Iithayile zeglasi zithathwa njengezinto zokugqibezela iiphuli zamachibi okudada. Iindleko zayo eziqhelekileyo ziyi- $ 75 ukuya kwi-100 ngeenyawo zenyawo, kodwa inokubiza kakhulu kuxhomekeke kuhlobo lwethayile yeglasi kunye nobunzima beprojekthi. Ixabiso leethayile zeglasi ziyahluka kakhulu ngenxa yezinto ezithile ezinje ngendawo, ukuhambisa kunye nomgangatho.
Iindleko zabasebenzi nazo ziphezulu kuba iithayile zeglasi zinzima ngakumbi ukuzifaka xa kuthelekiswa neetiles zeceramic kunye neethayile zeporcelain. Ngokungafaniyo neethayile eziqhelekileyo, iileyili zemibala yeglasi kufuneka zisikwe ngokukodwa ngesandla ukuze zilunge ngokufanelekileyo kwiikona zamachibi nakwezinye iindawo ezinobunzima kwidama lokuqubha. Kwakhona, ifuna imigca ye-grout ukuqinisekisa ukucoceka kwayo. Kukwacetyiswa ukuba ukufakwa kweethayile zeglasi kumadanyana okuqubha kushiyeke kwiingcali kunokuba kwenziwe njengeprojekthi ye-DIY.
Ukungancedi kweTayile yePhuli yeGlasi: Sebenzisa iithayile zeglasi kusenokubonisa inani leempawu ezimbi. Nangona ithathwa njengenye yezona zinto zihlala zihlala echibini lokudada, isenomdla wokuqhekeka kunye ne-chip. Nangona kunjalo, oku kuxhaphake kakhulu kwizinto ezingekho mgangathweni. Kwakhona, ezinye iithayile zeglasi zinemiphetho erhabaxa. Oku kunokuba sisiphumo senkqubo yokuvelisa okanye ukunciphisa ithayile. Imiphetho erhabaxa inokuqwalaselwa ngokusika ngononophelo ngexesha lofakelo nangokubetha imiphetho ngokufanelekileyo.
Iiporcelain kunye neetiles zeceramic zezona zinto zixhaphakileyo kumachibi okudada. I-Porcelain tile yaziwa ngokudibanisa ngokuhambelana nemimandla. Uyilo ngobulumko, olu hlobo lokugqiba iiphuli zokubhukuda zilungele indlela exubeneyo yezinto njengoko inokudityaniswa kakuhle neglasi okanye ilitye. Kuza nakwiindidi ezahlukeneyo zokugqitywa (i-glaze okanye i-textured) kunye nohlu olubanzi lombala kunye noyilo.
Iithayile zeCeramic ziyaziwa ngokuba zezona zinto zinokuthenjwa kumachibi anamhlanje. Kufumaneka ngokubanzi kwimarike, kulula ukusika kwaye kulula ukuyifaka xa kuthelekiswa neetayile zeglasi. Iithayile zeCeramic nazo ziyakrwela kwaye zinokumelana neekhemikhali kwaye azichukumiseki emanzini. Ihlala ixesha elide kwaye ifuna umgudu omncinci ukuyigcina. Iithayile ze-Porcelain, kwelinye icala, zikwanazo nezixhobo ezifanelekileyo zokugqiba kumachibi okudada anamhlanje ngenxa yoxinano lwawo oluphezulu kunye nokumelana nokufunxwa kwamanzi. Iyaxhathisa kwiqabaka nakwezinye izinto ezibi zemozulu kwaye ziyilelwe ukuba zinganyibiliki. Iithayile zeporcelain nazo azifunxi ubushushu azinabuthathaka kwaye kunzima xa kuthelekiswa nelitye lendalo. Ngokwendlela yokuphatha, zombini iileyili zeceramic kunye ne-porcelain kulula ukuhamba.
Ixabiso: Iithayile zeCeramic kunye ne-porcelain zezona zinto zifikelelekayo zokugqiba izixhobo. Ezi zilungele abaninimzi abafuna ukuvelisa isiko lokujonga iiphuli zabo zanamhlanje ngaphandle kokophula uhlahlo-lwabiwo mali. Ngokwesiqhelo, kuthatha i-avareji ye- $ 6000 ukuya kwi-10,000 yeedola ukuya kuthi ga kwi-pool yokubhukuda ephakathi.
Ukungancedi kweethayile zeceramic kunye ne-porcelain: Omnye umba wokuba iithayile zeceramic kunye ne-porcelain ezikhoyo kukuba ayibubambi ubushushu kakuhle, ke ngoko i-pool flooring inomdla wokubanda kakhulu iinyawo. Kodwa ngenxa yoko oku kwenza ukuba umgangatho wamachibi afudumale ngokwaneleyo ngeentsuku ezishushu zasehlotyeni.
Iithayile zelitye zilungile ukuba ufuna ukufezekisa ukujonga kwendalo kunye nendalo kwephuli yakho yokubhukuda. Inika indalo kunye nokufudumala kuseto lweephuli. Kwaye iza ngeendlela ezahlukeneyo, imibala kunye nokugqitywa. Ezona ntlobo zixhaphakileyo zamatye endalo asetyenziselwa ukudada ngamatye esanti, ilitye lekalika, ilitye eliluhlaza kunye neethayile zegranite ezipholileyo.
san luis obispo abafoti bomtshato
Nangona ixhaphake kakhulu kwiMeditera kunye nakwizinto eziphefumlelweyo zoyilo, iithayile zendalo zisebenza kakuhle kuyilo lwala maxesha lwamachibi. Ubume bayo bufanelekile ukuba ufuna ukufaka iphuli yakho ngaphandle komthungo kwindawo ejikelezileyo.Izibonelelo eziluncedo zeethayile zamatye endalo zibandakanya ukumelana nesiliphu kunye nokukwazi ukugcina ukufudumala xa zivelisiwe elangeni.
Ixabiso: Ixabiso leethayile zendalo zinokuya ezantsi ukuba zisetyenziselwa iiprojekthi ezinkulu. Kuqwalaselwa njengenye yezona zinto zibiza kakhulu zokugqiba iiphuli kunye nexabiso layo elifikelela kwi-10 ukuya kwi-30 ngeenyawo nganye.
Ukungancedi kweethayile zelitye lendalo: Kuba amatye endalo anakho ukugcina ubushushu xa eselangeni, olu hlobo lwamachibi okugqiba izinto lunokutshisa kakhulu ukuba indawo ejikeleze amadama okudada. Isilayidi, ngakumbi, sinokutshisa kakhulu. Ngokubhekisele kufakelo, iithayile zelitye lendalo zinokuba nzima kakhulu kwaye ziya kufuna uncedo lomntu ongaphezulu ekushukumiseni okanye ukuseta isiqwenga ngasinye endaweni.
Eli chibi lokudada lanamhlanje linembonakalo ephefumlelweyo yaseAsia kunye nokuziva itropiki kuyo. Umsebenzi wetayile yanamhlanje weetayile unemibala eluhlaza okwesibhakabhaka, eluhlaza kunye nemdaka ukunika ukubonakala kwelagoon yehlathi. Uhlobo olwahlukileyo lweli chibi libandakanya umda ophakamileyo wesileyiti kunye namatye omlambo ansundu. Imibala efudumeleyo yomhlaba yamatye endalo ibonelela ngokuchaseneyo okubonakalayo kwengca eluhlaza. Iijethi zamanzi zongezwa echibini ukuze zenze amandla emanzini, zivelise isiphumo sokuthomalalisa ukujonga kwaye sinyange ukubamba. Ecaleni kwedama kukho iplanga eliphakanyisiweyo eligutyungelwe ngophahla. Isofa yanamhlanje kunye nezitulo zokuphumla zibekwe ngaphezulu kwayo ukubonelela ngendawo yokonwabisa iindwendwe. Ekupheleni kwephuli yindlu yeendwendwe, apho iindwendwe zinokonwabela ukujonga ngokuthe ngqo iphuli yanamhlanje.
Apha ngezantsi sabelana nawe ngezinye zeyona mifanekiso mihle yoyilo lwangoku lweephuli ukukunceda ufumane ukukhuthazwa ekwakheni elakho ipuli lokuqubha.
I-epitome ye-oasis yetropiki, le yanamhlanje kwindawo yokubhukuda yomhlaba ibonelela ngendawo yokuphumla eyahlukileyo kubasebenzisi bayo. Kubekwe embindini wokuhonjiswa kweenkuni zendalo ziibhentshi zomthi zangoku ezixhonywe kwizithuba zisebenzisa amatyathanga esinyithi- ukubonelela ngohlobo lokuhlala olugxunyekwe ngemiqamelo yentsimbi kunye neenkcukacha zeentyatyambo ezikroliweyo. Iithayile ze-ceramic eziluhlaza kunye eziluhlaza zisetyenziselwa iphuli yokudada, inegalelo kwimpembelelo ebonakalayo yokuhlaziya amanzi aluhlaza okwesibhakabhaka. Umjikelezo wonke wale ndawo unqamlezwe yimikrozo yeglasi enika umbono ongaphazanyiswanga wolwandle olujikelezileyo.
Umgangatho omkhulu wamatye angokwemvelo amile ngokungafaniyo unika eli chibi lendalo yanamhlanje kunye nokuziva okufudumeleyo nokumema. Iimbumba zomhlaba ezimdaka ngombala nezingwevu ezivela phantsi zinika umahluko otyebileyo omangalisayo kumbala oqaqambileyo omhlophe oqaqambileyo wezinto zokwakha kwisithuba. Indawo yedama ibiyelwe ngeziporo zeglasi eziphantse zingabonakali. Zininzi iingxangxasi zamachibi ziyafumaneka eludongeni, zibonelela ngento yoyilo eguqukayo kwaye ngaxeshanye, ukuphucula amava echibi. Eli chibi likhokelela kuvulo oluvulekileyo oluhlala indawo yokuhlala kunye nesikhululo segrill sangaphandle esilungele ukonwabisa abahlobo.
Eli phuli lihle lokubhukuda linomphezulu omnyama oluhlaza okwesibhakabhaka kunye neziqithi ezinamanzi. Umgangatho omkhulu wamaplanga ubonelela ngendawo yokungena ngaselunxwemeni ngelixa ingxangxasi yenza isimemo esimemileyo kunye nemvakalelo yetropiki.
Eli chibi lanamhlanje libonisa ubuhle kunye nobuncinci. Ukuhambelana nobuhle be-aesthetics elula, eli chibi lokuqubha linefom yoxande ehlaziyiweyo edityaniswa ngumbala wombala ongathathi hlangothi. Umbala opholileyo weethayile uyinika ukujonga okuhlaziyayo, okuphuma kule ndawo ingaphandle. Imida yegrabile yendalo inika umahluko kubume kunye nokufudumala ngelixa ugcina ukukhanya kombala kuvelisa ukukhanya endaweni, okwenza indawo ibonakale inkulu kwaye ikhanya ngakumbi. Ekugqibeleni, ungabona izitulo ezimbini zokuphumla zangoku ezibekwe phantsi kweperola emhlophe. Kukwakho nokuhonjiswa okuncinci kakhulu, kodwa akubeki esichengeni kubuhle bokuyilwa.
Eli chibi elingapheliyo linika umbono wento yokudibana kwamanzi kunye nolwandle olujikelezileyo. Ukuqhubekeka koyilo kufezekiswa ngokungabeki imida ephakanyisiweyo emaphethelweni echibi, kodwa endaweni yoko kuyivumela ukuba ihambe ngokukhululekileyo ukuya esiphelweni. Umgangatho omkhulu omhlophe wamatye okwendalo wenza ipatio ibanzi ngakumbi ngelixa ibonelela ngokwahlukileyo kumbala opholileyo wamanzi. Uyilo olumiliselwe i-L lwedama lwenza ukuba indawo isebenze ngokufanelekileyo njengoko ivumela abasebenzisi abaninzi ukuba bangene echibini, kodwa kwangaxeshanye ivelisa into enomdla ebandakanya indlu.
Eli chibi lanamhlanje elingapheliyo limi kumda wepati yanamhlanje. Amanzi azolileyo aluhlaza abonelela ngokwahlukileyo okuhlaziyayo kumhlaba ofudumeleyo wethoni yendalo. Ukutshatisa iintsika zamatye kunika uphawu olufihlakeleyo kunye nokuthelekisa kubume bendawo, kodwa kwangaxeshanye, kudityaniswa ngokuvumelanayo kunye nokugqitywa komgangatho. Ekupheleni kwepatio yikhitshi elingaphandle elinesikhululo sokugcoba - silungele ukutya ngaphandle nangamaqela amancinci. Iziqwenga zefanitshala zangaphandle ezilukiweyo zibekiwe kwicala lephuli ukubonelela ngendawo yokuphumla kunye nokuphumla. Umbala opholileyo wokukhanya ohlaza okwesibhakabhaka kunye nemithwalo eluhlaza okwesibhakabhaka ifana nombala wephuli, ekhokelela ekubonakaleni okuhambelanayo.
Eli khaya lihle lale mihla livulekela kwipatiyo yamatye yendalo kunye nephuli yokuqubha evuselelayo. Umxube weethayile zemibala unika ichibi umbala opheleleyo ohlaza okwesibhakabhaka onobunzulu kunye nobukhulu. Xa ibekwe ngokuchasene neethayile zeceramic ezingwevu, ipuli yokuqubha ime ngaphandle, isebenza njengeyona ndawo kugxilwe kuyo kule ndawo mihle yokuhlala ngaphandle. Iifestile ezinkulu zeglasi zinika umbono wento eyongeziweyo, kwaye kwangaxeshanye zinika abaninimzi umbono opheleleyo wedama. Itafile yesibhozo yezihlalo zokutyela imiselwe ekugqibeleni ukubonelela ngendawo yokutya okungaqhelekanga kunye neentlanganiso zamaqela amancinci nosapho kunye nabahlobo.
Leli patio elihle langoku liqukethe i-ceramic tile kumachibi omhlaba, kunye nebhubhu ye-spa ephakamileyo kunye nokwakhiwa emgodini womlilo. Umbala opholileyo ongwevu wolwalwa lwamatye wongeza ubungqongqo bendalo, ngelixa amatye e-cobble asetyenziswa kwindawo yokuthambisa ye-spa ebonelela ngombala we-rustic ophikisana nokugqibezela kwendawo. Ibhafu ye-spa ekufutshane nedama eliphambili ibonelela ngendawo yokuphumla, ivumela abasebenzisi ukuba bathathe ikhefu ngelixa bedada. Umlilo wegesi, ngakolunye uhlangothi, unikeza ukufudumala xa kukho imozulu ibanda. Eli phuli langoku kunye nendawo yokuhlala ngaphandle ilungile kwimisitho yasemva kwemini kunye nakwiindibano zangokuhlwa ezingaqhelekanga.
Eli phuli lihlaziyayo lijikelezwe ngamatye ashushu endalo kweli khaya lihle. Ngaphandle kwendawo yokutyela egutyungelweyo enekhitshi elingaphandle elivumela abasebenzisi ukuba bonwabele umbono wedama njengoko bephumla kwiziqwenga zefenitshala zala maxesha. Isigubungelo esisetyenziselwa oku kukuqhubekeka kophahla olukhoyo lwendlu ephambili, okwenza uyilo luqhubeke ngakumbi. Izitulo ezibini zokuhlala kwigumbi lokuhlala zimiselwe ecaleni echibini ukubonelela ngendawo yokuphumla ngelixa iiglasi ezicacileyo zigubungela i-perimeter ngaphandle kokuthintela ukubonwa kwephuli.
Amachibi okudada amxinwa amade sisisombululo esifanelekileyo sokusebenzisa amaqashiso anendawo encinci. Le ndlu yabucala inephuli encinci ende esebenza njengendawo enomdla emanzini. Ucingo olude olwenziwe ngamatye arhabaxa lunika uyilo umahluko kubume ngelixa lusebenza njengodonga lwabucala. Ukuhambelana nesikimu sendlu esingathathi hlangothi, iithayile zamachibi amnyama zisetyenziselwa ukwenza ukuba amanzi abonakale njengombala omnyama oluhlaza okwesibhakabhaka. Usihlalo we-Lounge kunye ne-canopy ephathekayo nayo yenziwe ngombala ofanayo ukubopha iphalethi yonke kunye. Eli chibi langoku liyimbonakalo yokwenene yobuhle kunye nobuhle ngendlela encinci.
iikhabhathi ezimhlophe zokubala iikhonkrithi
Indawo yokubhenela elunxwemeni inikezela iindwendwe zayo umbono omangalisayo wolwandle njengoko bonwabela ukuntywila kwemini yabo echibini. Iithayile zikaMoses zazisetyenziselwa ukwenza ipateni yejiyometri kumgangatho wedama, okukhokelela kwinkcukacha elula kodwa enomdla kuyilo. Ngaphandle kwedama lale mihla kukho ityhubhu ngelixa ekugqibeleni kukho izihlalo zokuphumla ezivumela iindwendwe ukuba ziphumle. Olu luyilo lusebenzisa ikhonkrithi yendlela ekhokelela kumnyango ocociweyo oya ngqo elunxwemeni. Imithi echumayo kunye nohlaza olugqityiweyo ligqibezela ukubukeka okuqabulayo kwale tropical oasis.
Eli khaya lala maxesha livula indawo yokudada yangoku emva kwendlu. Iingcango ezinkulu zeglasi ezityibilikayo ezizalisekayo ngokupheleleyo esiphelweni seendonga zidibanisa indawo yokuhlala yangaphakathi ukuya ngaphandle, ngelixa kwangaxeshanye kusenziwa umoya omoya kunye nokumema. Uhlobo lwakhiwo lwendlu oluhlengahlengisiweyo lubonakaliswa ngamanye amacandelo oyilo ngokuzigcina zintle kwaye zincinci. Iithayile ze-porcelain ezimnyama eziluhlaza zisetyenziselwa iphuli, enika ukujonga okuhlaziyayo okuphumla emehlweni, ngelixa kwangaxeshanye kuzisa umbala opholileyo kwindawo. Ukudityaniswa kokuhonjiswa kweenkuni kunye neethayile ezimhlophe zeceramic zibonelela ngombono owongeziweyo ngokubonisa umahluko. Cwangcisa ngaphezulu kophahla lwendlu yanamhlanje yichibi elide elimxinwa elinemibono emangalisayo yesixeko esijikelezileyo. Uphahla lwendlu yeyona ndlela ilungileyo yokusebenzisa isithuba sepremiyamu njengoko ikuvumela ukuba uyisebenzise ngeendlela ezininzi, nokuba yeyokonwabisa iindwendwe okanye ixesha lakho lobuqu. Ecaleni kwedike kukho izitulo zokuphumla zangoku ezibonelela ngendawo yokuhlala abasebenzisi, ngelixa indawo yokuhlala engaphandle imiswe kwinqanaba nje elingezantsi, kufutshane negadi eluphahleni. Eli chibi lophahla lijongeka linandipha ngakumbi ebusuku xa livumela abasebenzisi ukuba bajonge iinkwenkwezi ngelixa betshona echibini.
Eli dama lokuqubha lanamhlanje elixande liqaqamba ngokuchasene nemvelaphi yomgangatho wokhuni kunye nezityalo eziluhlaza eziluhlaza. Uyilo olunomdla olufunyenwe kumgangatho wephuli lwenziwa ngokusebenzisa iithayile ezincinci zemibala ezicwangciswe kwipateni egoso. Ngelixa ukudibanisa imibala emhlophe kunye nemibala eluhlaza okwesibhakabhaka kuvelisa umbala ohlaziyayo wedama. Olunye uphawu olunomdla lokuba olu hlobo lwamachibi abonisa kukuba imibala iyashenxisa kwaye inike isiphumo esimenyezelayo kuxhomekeke kukuvezwa kukukhanya. Umgangatho omgangatho weplanga weplanga wenza umahluko kwaye ubonelele ngendawo ebanzi yokumisela ifanitshala yangaphandle.
Idama eliphakamileyo lihleli kwinqanaba lesibini lale ndlu intle yanamhlanje. Iithayile ezimnyama eziluhlaza ezisetyenziselwa echibini zinika amanzi umbala opholileyo, othobayo emehlweni. Imile ngokuchasene nemvelaphi engathathi hlangothi, idala ukugxila okumangalisayo kwekhaya. Ngasentla kwedama kukho umthi weplanga onika umthunzi okhethekileyo kunye nomdla obonakalayo owongeziweyo kuyilo. Iithowuni zendalo ezinxibelelanayo zazisetyenziselwa ukugqibezela ingaphandle leephuli eziphakamileyo, ngelixa iiglasi zemizila yayiqeshelwe ukwenza imvakalelo evulekileyo nomoya ekhaya.
Eli lixesha elimangalisayo lokujonga ebusuku ngephuli yokuqubha yanamhlanje. Ukwenza iphuli yokubhukuda ibonakale inomdla, izibane ezingaphantsi kwamanzi zongezwa kwiindonga zechibi. Njengoko ukukhanya kubonakaliswa kwaye kuthintelwe emanzini kunye neetayile zedreyini, kuyenziwa isiphumo esikhanyayo, esikhokelela ekwakhiweni kwemibala ebengezelayo. Ezinyaweni zephuli kukho indawo ebekelwe iisofa eziphakanyisiweyo zangoku - ezilungele ukudibana nosapho kunye nokonwabela ukuncokola nabahlobo. Izibane ezishushu ezikhanyisa ipaneli nazo zinegalelo kwimo yokwamkela indawo.
Amachibi eglasi anikezela ngenkangeleko yangoku ngakumbi echibini lokuqubha eliqhelekileyo. Ukusetyenziswa kweglasi emaphethelweni kudala inkohliso yokungapheliyo kunye noyilo oluqhubekayo oludibanisa iiperimitha zangaphakathi nangaphandle echibini. Kwakhona, iglasi ecacileyo inika umbono wamanzi okuzola, kubandakanya nabadadayo ngaphakathi. Iglasi ikwaxhaphake ngakumbi kuyilo lomhlaba olungasentla, apho iindonga ezipheleleyo zephuli ziyabonakala kwaye ziphakanyiswe ngaphezulu komgangatho womhlaba. Uyilo olu lukhangeleka linomdla ngakumbi ngokusetyenziswa kweethayile zepateni yomgangatho wedama. Ukuhlelwa komhlaba oku-Smart kunika imeko yetropiki yanamhlanje ngelixa usebenza njengeendonga zepherimitha zendlu.
Eyakhelwe emaphethelweni ale ndlu esecaleni lentaba, eli dama lokuqubha linika umbono oqaqambileyo wezibane zedolophu ebusuku, kunye nokuphefumla okuthatha indalo kusasa. Ukukhanya kwe-radiating ngobuhle bayo obuncinci, eli chibi lala maxesha likhanyisa le ndlu yangasemva kwendlu ngaphandle kokuhonjiswa konke konke. Ukukhanya okungaphantsi kwamanzi okukhanyisa kunceda ekuveliseni umoya ofudumeleyo, ococekileyo ofanelekileyo kubo bobabini ukuphumla kunye nokudibana kosapho. Umgangatho womthi odibanisa iphuli nendlu ephambili wenza umahluko ocacileyo kunye nokugqitywa okumhlophe kunye nengca eluhlaza eluhlaza.
Eli khaya limihla leetropiki libonelela ngendawo yoxolo kunye nokuphumla kunye nedama laso lokuqubha elihle. Iqonga eliphakanyisiweyo emaphethelweni echibini lisebenza njengendawo yokuhlala kunye nendawo efanelekileyo yokonwabela amanzi apholileyo ngoku. Amatye endalo anqamleza udonga lwedama anikezela indalo kwisithuba ngelixa ujonga ngombala womhlaba wombala wendawo. Ukuhonjiswa kweenkuni zendalo kusebenza njengendlela yokuqhagamshela kwindlu ephambili. Ngaphezulu kokuziva okune-tropical kweli khaya, ukulungiswa komhlaba okuluhlaza nezinto ezinemibala kuyasetyenziswa.
Umbhobho onyawo lweli chibi lanamhlanje yindawo efanelekileyo yokuphumla yokufunda incwadi okanye ukonwabele nje umbono opholileyo wamanzi. Ukuxhonywa kwiintsika zomthi ziibhentshi eziluhlaza ezilayim kunye ne-tangerine kunye nemilenze ye-aksenti emnyama ezisa umbala wombala kwisithuba. Imabhile ye-Beige iqhutywa kuwo wonke umgangatho wokugqiba umgangatho wepatio, iintsika zamatye kunye nedama lokuqubha ukwenza ukubukeka okumanyeneyo kunye nokuqhubekayo. Amanyathelo adibanisa amacala echibini awasebenzi njengebhulorho kuphela kodwa ikwabonelela ngomdla kwindawo.
Eli khaya lala maxesha lidibanisa indawo yangaphakathi nangaphandle ngokusebenzisa umbala ohambelana nombala. Iifestile ezinkulu zeglasi kunye neengcango ezityibilikayo zenza ukubonakala okuvulekileyo ngakumbi, ngelixa yonke imibala emhlophe eyenza indlu ibonakale ikhanya ngakumbi, icocekile kwaye inomoya. Ukuqhubekeka kwale nto yoyilo kuyabonakaliswa nangona ukusetyenziswa kweendlela zeglasi ezikumda wechibi. Iithayile ezinemibala ekhanyayo esetyenziselwa iphuli inika umbono wento eyongeziweyo. Imimandla entle yetropiki edibanisa amagqabi aluhlaza kunye nezityalo ezibomvu zongeza ubomi kwinkangeleko encinci yale phuli.
Iliso leentaka elibona kule ndawo yetropiki libonisa izinto zalo zokuphumla kunye nokubukeka okumangalisayo okubonakalayo. Isiziba esenziwe ngokungaqhelekanga sisebenzisa iithayile eziluhlaza ukwenza ipateni yomgangatho ohamba ngokudibeneyo nefom yedama. Ibhulorho yejometri yongeza icandelo loyilo elinomdla ngelixa udibanisa izithuba ezijikeleze iphuli. Umxube owahlukileyo weegrey ezipholileyo nezifudumeleyo ezivela kumgangatho wendalo wamatye zinika ubunzulu kuyilo olupheleleyo lweli chibi langoku. Ibha yeephuli enendawo yokuhlala icwangciswe ngokuthe ngqo echibini, ukuphucula iindwendwe ngamava okutya okuqhelekileyo kunye nokuphumla.
Umbono obukekayo walechibi lokuqubha lanamhlanje ngokuchasene nokuphefumla okuthatha ulwandle kunye nemithi yesundu kuyenza ibe yindawo yetropiki eyinyani yokuphumla nokuzonwabisa. Iphuli yanamhlanje iphuma ngoxolo njengoko amanzi ahlaziyayo aluhlaza azalisa ichibi lide lifike esiphelweni. Ngokungabeki imida ephakanyisiweyo ecaleni kwamachibi emiphetho, utshintsho olungenamagingxigingxi luyenziwa. Izitulo zangoku zokuphumla ezenziwe ngomthi zimiselwe kumgangatho wendalo weplanga ngelixa indawo yokuhlala eyodwa kunye nemilenze egxininisayo ibekwe ngaphezulu echibini. Enye into enomdla kolu luyilo ziibhentshi ezijingayo ezimiswe kwiintsika ezenziwe ngomthi.
Uyilo lwamachibi oMdibaniso oDibeneyo onokuwathanda:
Uyilo lweLwandle lweLagoon - Imibono yeChibi leCabana - Amachibi okudada aManzi - Amachibi okudada amahle
Iindandatho zesithembiso zenyuka i-pandora yegolide
izimvo zoyilo lweeshawa
Ingoma encinci yentombazana katata yelizwe